Aquitaine: onye guru akwukwo banyere ihe nrite nke Planet 2020 | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Aquitaine bụ akwụkwọ kachasị ọhụrụ nke onye edemede kacha ere ahịa na Spain: Eva García Sáenz de Urturi. E bipụtara ya na 2020, ọ bụ akụkọ mgbe ochie ochie, onye isi okwu ya bụ Eleonor nke Aquitaine - nke a makwaara dị ka Eleanor - onye ga-eme ihe niile iji chọpụta ihe kpatara igbu nna ya, Duke Guilhèm X nke Peitieus.
Ebumnuche ahụ gbara gburugburu nke enigmas, sigil, ịbọ ọbọ na ọbụnadị idina. Dị ka a ga-asị na e nwere egwuregwu nke ocheeze, a ga-enwe ọtụtụ agha dị na akụkọ a, nke nwekwara ihe atọ na-ahụ n'anya. Site na akwukwo a onye ode akwukwo guzosiri ike ya na akwukwo edemede, eziokwu nke na-enwetaghachi site na inweta onyinye Planet na 2020.
1 Nchịkọta Aquitaine (2020)
1.1 Ọnwụ dị omimi
1.2 Atụmatụ nke imegwara
1.3 Mgbanwe a na-atụghị anya ya
2 Nnyocha Aquitaine (2020)
2.3 Nkwadebe nke akwụkwọ akụkọ
3.1 Ọmụmụ ihe na ahụmịhe ọrụ
3.3 Akwụkwọ site n'aka Eva García Sáenz de Urturi
Gbanwee Aquitaine (2020)
Ọnwụ dị omimi
Na 1.137, Guilhem X, "Duke nke Aquitaine", ruo Compostela mgbe ogologo njem gachara. Na-abịa n'ihu nnukwu ebe ịchụàjà nke katidral, na mberede ida daa. Gị akpụkpọ -Kedu na-acha anụnụ anụnụ- akara site na "ugo ọbara", ahụhụ oge ochie etinyere na Normandy. Ndị niile na-ahụ nke ahụ na-eju anya site na ọnwụ dị omimi nke onye ndu.
Otu n'ime ndị kasị emetụta bụ nwa ya nwanyị: Duchess Eleanor, WHO, con naanị 13 afọ, ga-eweghara alaeze ahụ. Ya na-ekwusi ike na nna ya bụ ndị ndị Capet gburu (ndị ikwu nke Eze Luy nke Isii nke France), n'ihi nnukwu ọdịmma ha na ala Aquitaine.
Atụmatụ nke imegwara
N'ihi ihe niile merenụ, onye ga - eketa ocheeze ahụ na - eme atụmatụ nke imegwara nke ọ ga - achọ ịbanye n'alaeze France wee nweta ntụkwasị obi ya. Iji mezuo nzube ya, nwa agbọghọ ahụ ga-agha ụgha nke nna ya. Akwụkwọ ahụ ga-egosi dika uche nke Duke alum di na nwunye n'etiti nwa ya nwanyi y the Kid King (Luy VII), nwa Eze Luy nke Isii nke France.
Tupu ịmalite aghụghọ ya, Duchess ga-ekwupụta ihe ọ bụla ọ zubere maka otu onye ụkọchukwu na-eto eto, onye na-ejigide njirimara na-enweghị atụ.
Mgbanwe a na-atụghị anya ya
Leonor na-agba ịnyịnya ruo mgbe ọ ga-abịa onye ọchịchị Luy VI nke France, a maara dị ka "Abụba Eze". Nke a, ozugbo, dozie alụmdi na nwunye n'etiti duchess na nwa ya nwoke. N'oge oriri ahụ, na mberede, eze dara, n'okpuru otu ọnọdụ ahụ dị ka Guilhèm X. Nke a na-emebi obi enyo nke Leonor, onye ga-eduba France na Luy na-eto eto ugbu a.
Ha abuo ga-ebido nyocha dị egwu banyere ọnwụ ndị a na-adịghị ahụkebe nke ndị ikom a dị ịrịba ama. Maka nke a, ha ga-echigharịkwuru nwamba Aquitanian, na ndị nledo akụkọ nke ndi-isi. Ndị na-eto eto na ndị isi na-enweghị uche ga-agabiga ọtụtụ ọnọdụ. N'ime njem a, otu nwatakịrị nwoke - onye agbapụrụ n'oké ọhịa ọtụtụ iri afọ gara aga - ga - arụ ọrụ ngosi.
Aquitaine: Onyinye nke mbara ala ...
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme agbakwunyere na akụkọ ifo, set tumadi na ókèala French. Na ha 416 peeji, atụmatụ akụkọ Akụkụ 4, mepụtara na n'aka na 64 isiakwụkwọ dị mkpụmkpụ. Ọrụ ahụ nwere ụdị nkọwa abụọ: mbụ mmadụ, nke Leonor na Luy dere; y en onye nke ato, site na onye maara ihe niile.
Akwụkwọ Basque weghaara afọ iri nke ndụ Eleanor nke Aquitaine, otu nwanyị nwere akụkọ ihe mere eme pụrụ iche - ọ bịara duru alaeze atọ dị mkpa nke Europe. Nkata ahụ mejupụtara ihe omimi nke ọnwụ nke ihe osise abụọ dị mkpa nke oge ahụ na akụkọ ifo. Na mgbakwunye, ọ na-abanye n'ime okwu ndị ọzọ, ma nke onwe ma nke mpụga, nke na-enye akụkọ dịgasị iche iche.
Nkwadebe nke akwụkwọ akụkọ
Eva emeela nnukwu aha maka akwụkwọ akụkọ ya; nke mbụ, maka ịdị mma nke akụkọ; na nke abụọ, maka nkwadebe ọ na-eme tupu na mgbe a na-akwadebe akwụkwọ ya. Na njedebe nke nkata nke Aquitaine, edemede raara otutu peeji ịkọwa akwụkwọ zuru ezu. N'ime ha, azọrọ na agụpụtala ihe karịrị otu narị akwụkwọ ma kọwaa njem ya gaa ebe bụbu mpaghara Aquitaine.
Na njem a ọ gara Bordeaux, Poitiers na Abbey nke Fontevrault, ebe Eleonor nke Aquitaine nwụrụ ma lie ya. Ebe ahụ nyochara banyere omenala na gastronomy nke oge ahụ, nke ọ gbakwụnyere iji mee ka akụkọ ahụ dịkwuo adị. Ọ gụkwara akwụkwọ mmuta, nke ọ mụtara gbasara nka ndị mọnk mere iji mepụta ihe odide ochie.
Sáenz de Urturi gbakwunyere a ìgwè buru ibu na akwukwo - ezigbo, maka otutu. Kwụpụta, n'ihi ihe doro anya, ndị na-akwado ya: Leonor na Luy; Agbanyeghị, onye edemede ahụ elegharaghị mkpụrụedemede nke abụọ anya ma nye ha ọmarịcha ụlọ na ụlọ arụsị zuru oke. N'etiti nke ikpeazụ kwụpụta: Raymond de Poitiers Nwanne nna protagonist—, "Nwa", Adamar na Galeran.
Aquitaine bụ akwụkwọ ọgụgụ na ha kpata ọgba aghara, ruo n'ókè nke ịtụle ya edemede edemede. Agbanyeghị, dịka ọrụ niile, o nwere ndị na-ekwujọ ya, ndị na-ekwu na ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na-efu. Ka ọ dị ugbu a, ederede nwere nkwado 72% nke ndị na-agụ ya na weebụ.
Ya 5.807 Amazon ratings etinye ya na Ọnọdụ XNUMX na ahịa na otu edemede French. Imirikiti ndị ọrụ na-eme ya dị ka ibu kachasị elu, na nkezi nke 4,2 / 5. Ekwesiri ighota na 48% nyere kpakpando 5 ọrụ ahụ, na naanị 14% nyere 3 kpakpando ma ọ bụ obere.
A mụrụ Eva García Sáenz de Urturi na August 20, 1972 na Vitoria, otu n'ime obodo ndị mara mma nke oge ochie na Basque Country; ada onye oka-iwu na onye nkuzi. Ọ dịrị ndụ ruo afọ 15 na obodo ya, ka emesịrị soro ezinụlọ ya kwaga Alicante, obodo ebe ibi.
Nkwupụta nke Eva García Sáenz.
Ma n’oge ọ bụ nwata ma n’oge uto ya, e ji ịgụ ihe ọkụ ọkụ mara ya. Site na 14 afọ ọ malitere ide, nke a n'ihi mmetụta nke onye prọfesọ akwụkwọ ya na ụlọ akwụkwọ San Viator. Oge mgbe, Ọ na-agụ akwụkwọ agụmakwụkwọ na akwụkwọ akụkọ okike na ụlọ akwụkwọ dị mkpa nke Spanish. N'oge ahụ, o dere ọtụtụ akụkọ dị mkpirikpi nke o ji merie asọmpi ụfọdụ.
Onye ọkachamara, ọ gụrụ akwụkwọ na Optics na Optometry, ebe ọ na-egosipụta ọrụ ahụ - mgbe ọ dị afọ 27 - o jisiri ike na-elekọta ụlọ ọrụ mba. Mgbe ọ nọrọ afọ 10 na ngalaba a, ọ malitere ịrụ ọrụ na Mahadum Alicante. N'ihe dị ka afọ 2009 ọ laghachiri akwụkwọ; Eji m abalị ahụ niile na-enyocha ma na-ede ahịrị ole na ole nke gabu akwukwo mbu ya mgbe ato gasiri.
Na 2012, onye edemede Basque bipụtara onwe ya mbụ ya akwụkwọ n’elu ikpo okwu Amazon: Saga nke ogologo ndu: ulo ochie. Akụkọ ihe mere eme a dọtara mmasị nke ọtụtụ puku ndị na-eso ụzọ, nke kpatara n'oge a oke edemede. Na 2014, o mezuru usoro ndu ya na: Mụ Adam ma gosi ya akwụkwọ nke atọ: Gafe Tahiti; mgbe ha abụọ mechara nke ọma, o kpebiri ịrara onwe ya nye akwụkwọ.
Na 2016 ọ wepụtara White City Trilogy, usoro nke onye edemede edemede dere ọtụtụ nde ndị na-agụ ya na nke ahụ were ya ịghọ onye edemede kacha ere. Mgbe afọ anọ gasịrị, akwụkwọ mbụ n'usoro: Nkịtị nke obodo ọcha, nke Daniel Calparsoro mere ka ọ bụrụ ihe nkiri. Mgbe ogologo oge nke ịrụsi ọrụ ike na akwụkwọ, gosiputara akwukwo ohuru ya: Aquitaine (2020).
Akwụkwọ site n'aka Eva García Sáenz de Urturi
Saga nke Ogologo oge m: Ezinụlọ Ochie (2012)
Saga nke ogologo oge II: ofmụ Adam (2014)
Gafe Tahiti (2014)
White City Trilogy M: Mgbachi nke White City (2016)
White City Trilogy II: Mmiri nke Mmiri (2017)
White City Trilogy III: Oge Oge (2018)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Aquitaine